Kedu ihe bụ OOH? | Martech Zone Mkpebiri
Martech Zone » Mkpebiri » Mkpọ okwu na-amalite na O	» Ooh
OOH bụ okwu mkpọ okwu maka Apụọ-N'ụlọ.
Mgbasa ozi n'èzí, nke a na-akpọkwa mgbasa ozi dijitalụ n'èzí (DOOH), mgbasa ozi n'èzí, mgbasa ozi n'èzí, na mgbasa ozi n'èzí, bụ mgbasa ozi na-enweta na ngwaọrụ ndị na-adịghị n'ụlọ. Mgbasa ozi OOH gụnyere bọọdụ mgbasa ozi, mgbasa ozi ngosi, na akwụkwọ mmado a na-ahụ mgbe mmadụ na-apụ n'ụlọ ya ma na-eme mmemme na-emetụtakarị mgbasa ozi. Ọ gụnyekwara ahịa ọhụrụ, Audio Out-Of-Home (AOOH).